Wiil aan jeclahay Mar walba In uu igu baashaalo ayuu jecelyahay -Talo Isiiya - iftineducation.com
iftineducation.com – Asc, magaceygu waa nasteexo, waxaan rabaa inaad ila talisaan. wiil ayaan is jecel nahay. waana kulanaa marka aan kulano wuxuu jecel yahay inuu ila bashalo. bashaalka ma ahan mid bikro nimadayda wax u dhimayaa laakiin.Wuxuu jecel yahay inuu i salsalaaxdo oo mac iga siiyo afka waana u shegey inaanan ka helin arimahaas. Aniguna kama maarmo hadii aan cayrin lahaa….plzzz iila taliya.
JAWAAB CELINTA WACDARAHA EE GABADHAN:
Wcs walaal wiil inaad jeclaato ama lagu jeclaado waxa ka wayn oo aad iyo aad uga sii qiimo badani waa naftaada, karaamadaada, sharaftaada, ixtiraamka naftaada, waxaasoo dhana waxaa kasii wayni waa xukunka Ilaahay iyo dariiqiisa oo laraaco. Waxaad sheegtay inaadan ka maarmin wiilkan, hadiiba ay heerkaas kaa taagan tahay maad guursatid walaal inta aad xaaraanta ku dhacaysaan hadiiba aydan naftiina hanan karayn.
Arinta ah bikradayda waxba uma dhibayso, walaalo bikradii ayaa kaala waynaatay miyaa qiimihii ay lahayd Nasteexo, walaalo sow ma ogid bikradan kaala waynaatay sharaftaadii inay tahay wax daqiiqado gudahood ku baaba’a, sharaftaaduse waa ta waligaa kula joogaysa aduun iyo aakhiraba.
Bikradu kaliya maaha sida ay dadka badan koodu u fahansanyihiin xubinta yar ee jidhka gabadha ku taala kaliya inay tahay, bikradu intaas way ka wayn tahay walaal, bikranimadu waxa weeye walaal jidhkaaga inuuna nin wali taaban, taabashadaas oo looga jeedo inuuna nin ku dhunkan, ku salaaxin, inuuna nin dareenkaaga gaadhsiin heer aad u dhawaato inaad isu wada dhiibto.
Wiil uu dhalay ganacsade caan ah Oo askari si bareer ugu dilay Muqdisho.